Amadoda kaPaco abuya nezinto ezintsha | IBezzia
Ukubuya kwe 'Los Hombres de Paco' kufutshane nakufutshane!
USusana godoy | 04/05/2021 14:00 | Iindaba
'Amadoda kaPaco' zibe zezinye zoluhlu oluxhomekeke kwiintloko zethu. Kwakungunyaka ka-2005 xa sasiqala ukubona amapolisa amathathu anobomi obahlukeneyo kodwa engabahlobo iminyaka. Ukufika kwakhe, usapho kunye nothando okanye iintlungu zentliziyo kungekudala ziya kusitsala kwiscreen esincinci.
Ke iminyaka emihlanu kamva, njengayo yonke enye into ebomini, yayiza kuphela. Isiphelo esihlala sisishiya sifuna okungakumbi, ngaphandle kwento yokuba uninzi lwabalinganiswa beludlulile kuthotho. Ewe ngoku ubuya nomoya omtsha esiya kuthi sikwazi ukubona kungekudala UAntena 3!
2 Mangaphi amaxesha onyaka kunye neziqendu iLos Hombres de Paco enazo?
3 Isandi esitsha sengoma yothotho lweAntena 3
4 Singayibona phi 'iLos Hombres de Paco'?
Nangona ngamanye amaxesha kusenzeka ngalo lonke uthotho, akusoloko amaxesha alo onyaka enempumelelo efanayo. Yiyo loo nto xa abanye babalinganiswa bewushiya, mhlawumbi ukwehla kwababukeli kunokuba yinto enkulu. Kodwa inyani kukuba xa 'amadoda kaPaco' efika kumabonwakude babone ukuba yonke loo nto itshintshe njani. Babenayo yonke into esasiyifuna kwaye yayiyinto entle yokuhlekisa, ixesha leemvakalelo kunye nothando, konke kunxulunyaniswa nohlobo lomcuphi.. Njengamaxesha onyaka adlulayo, abalinganiswa abatsha nabo bongeza kwiziza ezikhoyo kwaye bahlala bebaluleke kakhulu, ngamabali amatsha othando nomona. Into eyenza umdla woluntu kwakhona uqaphele. Kuko konke oku nokunye okuninzi ngakumbi, uthotho lwalugcina abaphulaphuli abalungileyo kwaye abalandeli balo babekhala ngexesha elitsha.
Mangaphi amaxesha onyaka kunye neziqendu iLos Hombres de Paco enazo?
Uthotho, ukuza kuthi ga ngoku, lunamaxesha onyaka ali-9 kwaye zonke zidibanisa ukuya kwiziqendu ezingaphezu kwe-117. Kuba ayingawo onke amaxesha onyaka ayeneziqendu ezifanayo. Abanye basonwabisile nge-14 njengoko bekunjalo kwisizini yesibini, ngelixa eyona ixhaphakileyo yeyokuba babene-12 okanye i-13. Kwakuphakathi kwindyikityha yokufa kunye nokuvalelwa, ngo-Epreli 2020 xa kwakuthethwa ngokubuya okunokwenzeka. Ukufota kulindeleke ukuba kuqale ihlobo ukuba kunokwenzeka. UPaco Tous wavakala njengomnye wabalinganiswa bokuqala ukuba babe kuyo. Kodwa kwakamsinya emva koko, amagama awaziwayo anikwa ukwenza iqela elakhe lasoyisa sonke. Ngapha koko, ngehlobo le-2020, uMichelle Jenner kunye noHugo Silva baya kuqinisekisa ukubonakala kwabo kwisizini entsha.
Isandi esitsha sengoma yothotho lweAntena 3
Sithethile ukuba i-cast ibonakala igcinwe kakuhle, ke siza kuphinda sibabone abona bantu baphambili kunye nelona qela lamapolisa lingaqondakaliyo, kubandakanya umkhomishina. Kodwa ukuba kukho into eguqukayo, sisandi sayo. Ngoku lithuba likaEstopa, ophetheyo ekunikezeleni 'El Madero'. Ingoma entsha eza kuqala ixesha elitsha leLos Hombres de Paco. Nangona ulikhumbula ngokuqinisekileyo iqela lePignoise, ngoku nguEstopa oza kuthatha indawo ukongeza uthotho lwempumelelo.
Singayibona phi 'iLos Hombres de Paco'?
Kubonakala ngathi izahluko ezitsha ezili-16 ziya kwahlulwa zibe ngamathuba amabini onyaka. Kodwa eyokuqala, Kulindeleke ukuba iboniswe kwi-Antena 3, kwishedyuli yeXesha leNkulumbuso kwaye uqhubeke nokujongwa kwiAtresplayer yeNkulumbuso. Le yinto eyenzekileyo kuthotho oluthe kamva, sikwazile ukubona elubala. Kulindeleke ukuba yenzeke ngokufanayo neLos Hombres de Paco '. Kuba ayinguye wonke umntu oneli qonga kodwa bafuna ukubona iqela liphinda lidibene, lilwela okuhle kwaye likhumbula uthando oludala. Ngaba uyafuna ukuba ikhutshwe ngoku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Ukubuya kwe 'Los Hombres de Paco' kufutshane nakufutshane!